Personal Loan – IMF
Personal Loans (ပုဂ္ဂလိကချေးငွေ)
လူကြီးမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောအိမ်၊အိမ်ခန်းများ၊တိုက်ခန်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လိုအပ်သောအိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းဖြည့်စီးခြင်းစသောကုန်ကျစရိတ်များကို IM Finance မှ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး လိုအပ်ပါကပြင်ဆင်ပေးသောလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတို့နှင့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူလိုသောဆိုင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း စသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသည်။
လျှောက်ထားသူသည် ပြုပြင်မွမ်းမံလိုသောအိမ်၊ တိုက်ခန်း၊ မြေကွက်တို့အတွက် မိမိမှတရားဝင်အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားပြရပါမည်။
လျှောက်ထားသူများသည် မိမိလုပ်ငန်း၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့်မူရင်း၊ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မူရင်း+မိတ္တူ ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊လုပ်ငန်းတည်ရှိသောရပ်ကွက်၏တရားဝင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြောင်းထောက်ခံစာ နှင့် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများ(အရှုံးအမြတ်စာရင်း) ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
IM Finance is offering Personal Loan for the loan applicants such as decorating homes, apartments and necessary households furniture by joining with Decoration Companies and Furniture Companies.
The applicant must submit to show IM Finance the Real Named Grant of its own house, apartment or land.
The residential recommendation letter of ward administration office must be submitted.
Monthly income and reference also needed.
IM Finance is giving service for the applicants to the loan of Small Own Business extension.
The applicants must be submitted Original/duplicated National Registration Card (NRC), household census, the environmental recommendation letter of work site and Financial reports to IM Finance in time of application.